China MAGNETIC PHOTO PAPER mpanamboatra sy mpamatsy | Aotian
Anaran'ny entana:Taratasy sary andriamby
Ho an'ny tsora-by mavo eo an-damosin'ny aloha, ny tontolon'ny fanontana ary, ny maingoka matevina, ny adsorption fotsy sy mainty dia azo alefa mivantana amin'ilay zavatra misy andriamby, mazava ny lamina fanontana, ny fanamaintisan'ny ranomainty, ny vokany tsara , azo adhesion mivantana amin'ilay zavatra misy andriamby ao an-damosina, azo averina imbetsaka apetaka, afaka mamindra ny lokony dia tsara tarehy, afaka mampifanaraka ny lamina rehetra, famoronana DIY
Ny fototr'orinasa dia mampiasa pulp hazo voajanahary, ny arofanina matihanina ary ny volavolan-drafitra, ny fotsy mamirapiratra, ny lokon'ny fanontana dia tsara tarehy, ny sakany amin'ny loko dia malalaka, ny fahatsapana layering dia mamirapiratra, ny loko pirinty toa ny endriny, ny vokatry ny kalitaon'ny sary. Izy io dia manana ny mampiavaka ny tantera-drano maina haingana, loko marevaka, sary mahafinaritra ary kalitao milamina.
Tohano ny fanontana fanontana 5760DPI, gamut malalaka, fanoherana ny toetr'andro lava, fahamendrehana amin'ny loko, fotsifotsy, fampisehoana antsipirian'ny haavon'ny loko dia tsara, mety amin'ny famoahana sary feno loko, soratra kely hita mazava tsara, mamorona kalitaon'ny fanontana vokarin'ny matihanina.
Fitaovana: fitaovana silikona kilasy Micron, tsara sy malama
Blotting: Mitroka ny ranomainty eo noho eo, manonta azy amin'ny tanana, tsy mety simba, tsy mandika sary.
Taratasy fanoratana: base phase avo lenta, malefaka avo
Na azonao atao pirinty ny sarin'ny fianakavianao ary apetaho amin'ny vata fampangatsiahana izany. Azo ampiasaina amin'ny rindrin'ny birao koa izy io mba hampisehoana ny kolontsaina sy ny fomban'ny orinasa. Azo ampiarahina amin'ny zavatra magnetika koa izy io. tsara, tsy misy jamam-taratasy.Raha manao pirinty, dia tsara ny misafidy sary avo lenta, ny vokany tsara, ny lafiny fotsy amin'ny fanontana, ny lafiny mainty ho an'ny paty, ny fanontana ny sary dia azo zahana amin'ny endrika tiany indrindra. Mavesatra be ity vokatra ity . Kitapo 20 sy lambam-baravarana 10 ihany no vitanay ao anaty boaty.
Previous: Karatra PVC
Manaraka: PRINT ININT
T-Shirt Taratasy, Taratasy vy ho an'ny akanjo, Taratasy fametahana sary mamirapiratra, Fanontana taratasy ho an'ny sary, Taratasy famindrana mangarahara, Taratasin'ny sary mainty,